I-chongqing, China Apho Kuhlangana Girls Omnye Mans Ukuhamba
I-chongqing kwi-China nje omnye umbala isixeko ukuba kusenokwenzeka abanalo kuvakala phambi okanye nkqu travelled ukuba nangona kunjalo lento ngokuqinisekileyo elungileyo indawo hook phezulu kunye zinokuphathwa Asian abafazi, njengokuba kubhaliwe laziwa yezithuthi ngaphantsi travelled njengoko izigidi foreigners musa okokuba ngokusebenzisa apha ngathi ezinye iindawo kwi-i-bangkok, Pattaya kwaye nkqu i-manila. Eli nqaku liza zidibane kunye free ngesondo kwaye intlanganiso girls kwi-i-chongqing kananjalo ihlawulwe kuba ngesondo njengoko akukho omkhulu prostitution hooker icandelo lomboniso apha. Kunjalo, ukwazi njani ukuthetha Isitshayina ziya kukunceda immensely kodwa uyakwazi ukufumana ngumthetho kunye isandla imiqondiso yosasazo kwaye abaninzi abahlali bamele ndonwabe eyobuhlobo, ngoko ke uyakwazi ukufumana ngumthetho ngaphandle ukwazi na kwaphela. Mhlawumbi ungakwazi yiya kwi-YouTube kwaye bafunde ezinye ezisisiseko amazwi, uya kuba zange fluent ngenxa yayo s enjalo nzima ulwimi ukufunda kuba uninzi Westerners kwaye uninzi girls musa ukuthetha isingesi kakuhle kwaphela. Uza ngokuqinisekileyo ufuna ukuya kwelandelayo WeChat i-app kwindlela yakho iselula phambi arriving ngenxa yayo s engundoqo texting app okanye kwezo meko hookup app, phantse zonke Isitshayina abantu baya sebenzisa WeChat ukuba zithungelana kunokuba ubizo okanye i-Skype okanye nantoni na enye into. Alright, njani ungafumana prostitutes kwi-i-chongqing kuba ngesondo phambi sifumana jikelele ukuba picking phezulu free omnye girls. Akukho ezininzi kuhlawulelwe dlala ngesondo iindawo kwi-i-chongqing ngokwayo nangona kunjalo baya ingaba zikho zonke phezu town. I-okkt publicized kwi-intanethi okanye ukufumana koko kwaziwa ngokubanzi get raided kwaye kuyivala phantsi ngo amapolisa ngoko ke akukho izakuba kakhulu ka-ethandwa kakhulu ulwazi phandle phaya kuba ufuna ukufumana. Kukho ezininzi massage parlors kwaye saunas jikelele apho ungafumana i-erotic nude massage kwaye isandla umsebenzi, kusenokwenzeka ukuba kwa blowjob, kwaye abo ingaba eyona ndawo ukuya kukhangela. Ngamanye amaxesha ukuba elonyuliweyo likes kwenu, ngesondo iya kuba kwi-amakhadi kakhulu. Jonga erotic massage parlors kunye bomvu okanye pink ezongeziweyo ngaphandle phambili abalindi ngasesangweni.
Kukho plenty ka-Asian KTV s kwi-i-chongqing apho unako wabelane ngesondo, kodwa ezi kusenokuba kakhulu expensive kwaye ukwahlula okulungileyo kuba kuqala ixesha abo ayikwazi kuthetha yobulali ulwimi.
Uza kuba scammed phantse lonke ixesha
Ungakhetha kwakhona zama ukuba ahlangane hookers kwi-intanethi WeChat okanye ezinye dating apps. Kukho i-khetho ukufumana kwaye yathetha ukuba abantu kakhulu kufutshane kufuphi kwaye uyakwazi ukunika ukuba uzame, oko kukholisa imisebenzi ukuhlangabezana entsha enye ladies. Okanye zenze ntoni na imisebenzi engcono kulo naliphi na isixeko ukuba kukuba kwi taxi kwaye buza kwabo ukuthatha ukuba indawo kuba ngesondo, baya kusoloko kwazi apho ukuya kwaye uthathe ngqo phambili ucango. Zama ukufumana i-expat okanye taxi umqhubi kwaye buza kwabo apho ukufumana girls, ngesondo, okanye massage kwi-i-chongqing. Musa ukuthetha Isitshayina kuza kwenza ukuba intlanganiso enye girls kwi-i-chongqing kakhulu harder ngaphezu kwezinye iindawo. Kodwa ngenxa hayi abakhenkethi abaninzi ukuhamba ngalo enkulu yesixeko, kufuneka i-extreme kweentlobo zezityalo ifekta ukuba akukho abahlali bathe. Xa sihamba ngaphandle kwi bar okanye club okanye nkqu inqwelo mall yona ayisayi kuba uncommon kuba abantu ukuphakanyiswa stare e kuwe xa ufuna ukuhamba elidlulileyo. Uyakwazi zama kwaye yathetha kunye nabo, ndifumana ukucela okanye izikhokelo nkqu ecela ingaba uyazi apho oku street okanye ndawo nkqu ukuba uyazi apho kubalulekile, ukuze efumana yakho futhi kwinani ucango. Uzama ukuhlangabezana girls ngomhla iya kuba eyona imbi, uyakwazi intloko ukuba inqwelo malls njenge yenqila iphela Plaza, Jiabao Inqwelo Mall, okanye Wanda Plaza kodwa yakho mileage zahluke njengoko yakho impumelelo amazinga apha. I-nightlife ngu elikhulu yaba lula ngenxa ubuncinane kukho utywala obandakanyekayo kwaye uninzi girls uphumile kuba elungileyo ixesha wawulahla umphefumlo wabo inhibitions. Ngoku ladies iya kuba ngaphantsi nervous, uyakwazi nkqu zama umdaniso kunye nabo, nangona njengoko njenge ezininzi, dancing kukuba ngenye awkward ngaphandle kokuba uyazi njani ukwenza oko. Abanye okulungileyo nightlife iinketho ingaba Citi Park, Uhadi Irishname pub, phantsi komhlaba umqolo wesakhiwo esiphatha ubunzima bentoname kwi-Jinbei, Hayi, Soho, kanjalo kukho ezininzi iinkwenkwezi phantsi yi-riverside indawo kwi-Nan ‘a wesithili. Xa abantu befunda langaphandle iilwimi, kubalulekile ikakhulu kwenziwa ngokusebenzisa paperwork.
Baya kufunda ukubhala kodwa musa rhoqo ukuziqhelisa ukuthetha
Ngoko ke ithetha lonto ukuba banako ngokwenene ukwazi amazwi amaninzi zithetha kodwa aren khange kwaphela ethambileyo ukuzama ngqo kuthi kubo. Ukuba ufuna ukuhamba phezulu, ukuze kubekho inkqubela ngolohlobo kwi-mall, yena ngu ke get flustered kwaye ukuvuthuzela kuwe ngaphandle. Kodwa ukuba ufuna ukuthumela umyalezo kwi-China Uthando, ukuze kubekho inkqubela ngubani owaziyo abanye isixhosa ufuna oza kuba ngcono kakhulu esifutshane. Yena ufumana ukusayina phezulu ukuya kule ndawo ngenxa yokuba yena ufuna ukuya kuhlangana entsha guys, kwaye ngethemba lokuba entsha guy nguwe. Omnye mnandi izinto kukuba ezi i-chongqing girls uya kwazi ukuba baya kuphuma nani wonke umntu uya stare e kwabo. Oko kuthetha ukuba babe vula ukuba ekubeni yokuqala umhla e yakho apartment okanye hotel, ngoko ke baya akunayo ukukhombisa u-zonke yekratshi. Ukuba oko kukuthi imbono yakho, ngoko qiniseka ukuba incwadi a igumbi ngaphandle Airbnb. Oko izandi kakhulu ngaphantsi creepy lokumema kubekho inkqubela yakho ekhaya endaweni yakho hotel igumbi. Kukho ezininzi prostitution iinketho apha, hayi nje publicized okkt. Ukuba ngaba intloko ukuba massage parlors kwaye saunas uza ngokwenene ukufumana ezinye. Dibanisa, hookers ingaba uyasebenza kwi WeChat ukuba bayagwetywa yakho yangoku indawo uza na ukufumana kwabo. Kodwa ngcono indlela kuhlangana girls kwi-i-chongqing ngu-intanethi dating zephondo njenge-China Uthando. Kubalulekile kakhulu ethandwa kakhulu kweli lizwe kwaye kufuneka kuba uninzi ikhona enye girls
← Isitshayina Icacile Kufumana Ubudlelane e Isitshayina dating iinkonzo
Dating Isitshayina-Intanethi →